म को हु त?
म आफु जन्मे को देशमा परिवार को साथ मा बसि भबिस्य का सपनाहरु पूरा गर्न सक्ने भई दिएको भए यति टाढा बिदेशमा आउने थिइन होला। जिविको पार्जनको लागि आफू बसोबास गरिरहेको ठाउँ छोडेर कोरिया आएर मजदुरी गरि ज्याला लिएर जिउन बिबस प्रवासी मजदुर हु म।
कोरिया मा प्रवासी मजदुर को निम्ति लागु गरिएको इपियस मा कम्पनी स्वईच्छाले परिवर्तन गर्न पाउने अधिकार छैन मलाई। सबै निर्णय मैले होइन कम्पनी मालिक ले गर्ने गर्छ किन कि म कम्पनी संग त्यस्तो सम्झौता गर्न बाध्य छु।
मजदुर कानुन अनुसार मैले सेवा सुबिधा पाउनु ब्यबहार राम्रो गरिनु मेरो अधिकार हो।मजदुरि गर्ने क्रममा कुनै दुर्घटना मा नपरी स्वस्थ्य भई जिउने अधिकार छ मलाई। तर कोरिया मा ठिक बिपरित ब्यबहार गरिन्छ म माथी सेवा सुबिधा र हक अधिकार माथी कुठाराघात गरिएको छ भने मजदुरी गर्ने क्रममा रोजगारदाता को लापरबाही( काम गर्दा सुरक्षा सम्बन्धि आवस्यक उपकरण को कमि) का कारण अकालमै ज्यान गुमाउन र अंग भंग हुन बिबस छु म। प्लास्टिक को घर, कन्टेनर मा मानिस बस्न सक्छ त्यो पनि लाखौ भाडा तिरेर ?
तर पनि म ट्वाइलेट , बाथरुम, पानी नभएको र गर्मी मा ४०/४० डिग्री तापक्रम भएको थोत्रो कन्टेनर जस्को एउटा कोठा मा चार चार जना को दर ले लाखौ भाडा तिरेर बस्न बिबस छु म। के म मजदुरि गर्न कोरिया जवर्जस्ती आएको हु त?
अवस्य पनि होइन कम्पनी लाई मेरो आवास्यकता परेको भएर कम्पनी ले लिएर आएको हु तर म माथि कोरिया मा जवर्जस्ती पसेको घुस पैठिया को जस्तो व्यबहार गरिन्छ।
अपराधीक गतिविधि गर्ने अपराधी सोचिन्छ र खानै नपाएर आएको कंगाल जस्तो नजर ले हेरिन्छ कोरिया मा मलाई । रोजगारदाता लाई मैले गधाले जस्तो काम गर्न सकेन र सधै उसको बफादार दास जस्तो भएर नजर झुकाएर हेरे न र कम्मर भाच्चिने गरि ढोगेन भने राम्रो मान्दैन मलाई। कार्य स्थल मा कुटपिट, गाली- गलौच र अनेकन अभद्र व्यबहार को सामना गरिराखेको छु म।
के म योन हिंसा को सिकार हुन, कुटपिट र गाली सहन कोरिया आएको हु त? कोरियन नागरिक लाई ठेगना सोधेकै भर मा जेल जानु पर्छ मैले तर कार्यस्थल म माथी कुटपिट,गाली गलौच, दुव्र्यवहार भैइ रहदा प्रमाणित गराउन गाह्रो हुन्छ ।
के म बिदेशी भएकै भएर यसो भएको हो त?कोरिया मा मैले बिभिद धार्मिक , जातिय,बर्णिय विभेद को सामना गर्नु परेको छ। मैले कोरिया को सार्वजनिक स्थान या सार्वजनिक यातायात का साधन प्रयोग गर्दा मलाई फरक दृस्ठिकोण बाट हेर्ने गरिन्छ। म पनि अरु जस्तै मानिस अनि मजदुर हो।
अभद्र ब्यबहार गर्दा किन यस्को विरुद्ध मा कुरा उठाउन सक्दैन त म ? म कोरियन नागरिक न भएकै कारणले किन भेद भाव भोग्नु परेको होला? कोरियन सरकार ले प्रवासी मजदुर को आवस्यकता परेर ल्याए को भए पनि किन दास को जस्तो ब्यबहार गर्छ।
म स्वयम् ले मेरो अधिकार को बारेमा आवाज उठाइन भने अरु कसैले मेरो अधिकार को निम्ति आवाज उठाउने बाला छैन। चुपलागेर बसेमा मेरो अधिकार प्राप्त हुनेवाला छैन।
त्यसकारण मेरो अनि तपाईं हामी सबै प्रवासी मजदुर को हक अधिकार का निम्ति २०१७ अगस्ट २० तारिक दिउँसो २:३० बजे सउल छोङगाक मा जम्मा हौ। आफू खुशी कम्पनी परिवर्तन गर्न पाउने नियम सहित को डब्लुपियस का लागि र प्रवासी मजदुर माथी गरिने विभिन्न भेद भाव अन्त का लागि दवाव शृजना गरौ।
प्रचार प्रसार बिभाग एमटियु दक्षिण कोरिया